Ururka daalibaan waa urur Nooceeya? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ururka daalibaan waa urur Nooceeya?
Ururka daalibaan waa urur Nooceeya?
Dad badan ayaa su’aalo iska waydiinaya ururka daaliban kadib markii ay ka guulaysteen gumaystihii maraykanka, iyo xukuumadii Afkaanistaan ee uu gacanta ku samaysaytay maraykanku, dadka qaar ayaa moodaya inay daalibaanku yahay urur lamida kuwa Al-qaacidda iyo daacish, qaar kalana waxyaaba kale ayayba ka malaysanayaan oo ka sii fog, hadaba waxaan isku dayayaa inaan maqaalkan diirrada ku saarno dhawr su’aalood oo laga yaabo inay maskaxdaada ka guuxayso.
1. Daalibaanku ma wahaabiyo jihaad wadda mise waa Suuufiyo dagaalyahanno ah?Erayga Daalibaan waxaa laga wadaa luuqadda Bashtuuga “Ardaydii” waxaana asaasay Mulla cumar taariikhdu markii ay ahayd 1994, waxayna lagu asaasay magaalada Qandahar ee isla dalkan, waxayna ahaayeen arday barata Culuumta shareecada, Gaar ahaanna ku barta fiqiga iyo fahanka mad-habka imaamu xaniifa Aun, waxayna noqdeen ururkii ugu horreeyay ee isku takhasusa, iskuna fikira, iskuna qabiila(qabiilka Bashtuu) oo ka samaysma dalkan Afkaanistaan, (oo markii ugu horraysay waxay ahaayeen dhammantood qabiilka Bashtuu ina aysan ballaadhan ka hor)
.2. Caqiidada Daaliban.Daalibaan waxay u nasab sheegtaan caqiidada Maaturiidiyada, oo loo aaneeyo imaamu abu mansuur Al-maaturiidi, oo kamid ahaa culimadii ugu waawayn Ehlu sunnaha aadna isoogu dhawaayeen Ashaacirada, waana Caqiidada ay haystaan badana mad-habka xanafiyada iyo daafaha caalamka islaamka, waxuuna kusii badanyahay Afkaanistan, Bakistan, Hindiya, Tukiga, China, Iran, Bangaladesh, Iyo dawladaha yar-yar ee Ruushka hoosyimaada.Intaas haddii laga tago waxaa laga helaa ururka daaliban dad yar oon badnayn oo u nasab sheegta mad-habka Ashcariyada, lkn lagama helo urukan waxa u nasab sheegta wahaabiyada salafiyada ah.
Hadaba waxaan halkaa ka ogaannay in ururka daalibaan uu yahay urur Caqiiada ahaan ka fog kuwa kale ee jihaadiga ah sida Al-cida, iyo daacish iwm, bal ururadaasi waxay ku tilmaamaan daaliban urur suufiyo bidca ah, waajibna ay tahay inay qaataan caqiidada Wahaabiyada ama salafiyada, intii ay dagaalka kula wada jireenna waxay ahayd uun cadawgaaga cadawgiisu waa ina adeerkaa balse kama ahayn jacayl iyo midnimo ka dhaxaysa labada urur.
3. Dariiqada Ururuka.Uruka daaliban waxay kala haystaan 3 dariiqo oo kala duwan, ama waxay wardiga ka qaatan 3 sheekh oo kala duwan.* Dariiqada 1aad. Nabqshanbandiyada.النقشنبنديةDariiqadani waxay ku abtirsata Sheekh Baha’uddiin Mohammed Al- bukhaari, Al-nabaqshanbadi oo geeriyooday 1383.* Dariiqada 2aad الجشتية. waa dariiqo ku abtirsata sheekh muciin diin, Aljashti oo geeriyooday 1236.*Dariiqada 3aad القادرية.Oo iyana ku abtirsata sheekh abunajiib cabiqaadir Al-sahruudi oo geeriyooday 1168, mana ah cabdiqaadrika ay soomaali badani ka dariiqo yeelatay ee qaadiri kale.
Dhamman uruada salafiyada ah kuwooda jihaadiga ah iyo kuwa kalaba dariiqooyinkan waxay u yaqaanniin kuwo bidca ah oo waddada xaqa ah garamarsan, lkn kaliya waxaan u sheegaya inaan caddeeyo oo kaliya inaysan daalibaan wax shaqa ah isku lahayn ururada kale ee jihaadiga ah, balse uu farqi wayni u dhaxeeyo dhinac kastaba.Hadaba daalibaan waa urur islaami ah, sunni ah, una nasab sheegta dariiqooyinkii hore ee islaamka dhaxdiisa ka jiri jiray.
4. Maxay Daalibaan iyo Al-qaacidda ama Daacish kaga duwantahay?Ururka daalibaan waxaa uu kaga duwanyahay ururadan kale 4 qodob oo muhiim ah markaan ka nimaadno dhanka caqiidada.
1. Waa urur sal iyo baar Afkaanistaaniin ah oon lahayn wax Ajaaniba oo ka garab dagaallama iyaga.
2. Waa urur xidhiidh adag la leh qabiillada iyo hoggan dhaqameedka Afkaanistaan, sida ugaasyada iyo dariiqooyinkii hore, waxayna aad uga duwanyihiin daacish ama Alqaacidda oo innaba bulshada ay ka dhaxdagaallaman xidhiidh fiicani ka dhaxayn sida la sheego.
3. Dhinaca kala dambaynta. waxay u kala dambeeyaan noocii suufiyada lagu yaqiinay oo kale ee ahaa sheekha ayaa ushiisa u dhiibay hebal ama idan ayuu u haystaa amiirnimada, oo aad ayay uga duwanyihiin xarkaadka kale ee islaamiga ah.
4. Daalibaan waa urur Islaamiyiina, xornimo raadisa, oon dhaafsiisanayn dalkan Afkaanistaan oo ay rabaan ina sharciga islaamka ku maamulaan, qorshahooduna ma ah inay caalamka oo idil ku maamulaan, halkaasna waa qodob ay kaga duwanyihiin kuwa kale ee aduunka oo idil u dagaallamaya.
Hadaba waxaan ogaannay inay daalibaan tahay urur Islaamiyiina, suufiyo ah, xornimodoona, oo raba inay Afkaanistaan kaliya sharciga islaamka kumaamulaan.
Previous articleWaa maxay sababta uu Maraykan uga baxay Afghanistan? W.Q: Cabdirisaaq Rakuub
Next articleMareykanka iyo Midowga Yurub waxay ka digayaan in ciidamada Eritrea oo cusub la geeyo gobalka Tigray -ga ee Itoobiya